Mabasa Evaapostora 11:1-30
Petro anorondedzera kuvaapostora zvakaitika (1-18)
Bhanabhasi naSauro kuAndiyoki yekuSiriya (19-26)
Vadzidzi vanotanga kushevedzwa kuti vaKristu (26)
Agabhasi anoprofita nezvenzara (27-30)
11 Vaapostora nehama dzaiva muJudhiya vakanzwa kuti vanhu vemamwe marudzi vakanga vagamuchirawo shoko raMwari. 2 Saka Petro paakasvika kuJerusarema, vanhu vaitsigira nyaya yekuchecheudzwa+ vakatanga kumutsoropodza,* 3 vachiti: “Wakapinda mumba mevanhu vasina kuchecheudzwa ukadya navo.” 4 Petro akabva atanga kuvatsanangurira zvese zvakaitika, achiti: 5 “Ndaiva muguta reJopa ndichinyengetera, uye muchiratidzo chandakapiwa, ndakaona chimwe chinhu chichiburuka kubva kudenga chakaita sejira guru riri kudzikiswa nemativi aro mana, chikauya pandakanga ndiri chaipo.+ 6 Ndakanyatsochitarisa ndikaona mhuka dzepanyika dzine makumbo mana, mhuka dzemusango, zvinhu zvinokambaira, neshiri dzekudenga. 7 Ndakanzwawo inzwi richiti kwandiri: ‘Petro, simuka uuraye, udye!’ 8 Asi ndakati: ‘Hazviiti Ishe, nekuti handisati ndamboisa mukanwa mangu chinhu chakasviba, chisina kuchena.’ 9 Inzwi rakabva kudenga kechipiri rikati: ‘Rega kuti zvinhu zvacheneswa naMwari zvakasviba.’ 10 Izvi zvakaitika kechitatu, uye zvinhu zvese zvakabva zvakwidzwa kudenga zvakare. 11 Uye panguva iyoyo chaiyo, pane varume vatatu vakanga vakamira pamba pataiva, vatumwa kwandiri vachibva kuKesariya.+ 12 Mweya wakabva wandiudza kuti ndisazeza kuenda navo. Saka hama idzi 6 dzakaendawo neni, uye takapinda mumba memurume wacho. 13 “Iye akatiudza kuti akaona ngirozi yakamira mumba make ikati: ‘Tuma vanhu kuJopa, vanoshevedza Simoni anonzi Petro,+ 14 uye achakuudza zvichaponesa iwe neimba yako yese.’ 15 Asi pandakatanga kutaura, mweya mutsvene wakauya pavari sezvawakaitawo patiri pakutanga.+ 16 Ndakabva ndayeuka zvakataurwa naShe, paaiti: ‘Johani akabhabhatidza nemvura,+ asi imi muchabhabhatidzwa nemweya mutsvene.’+ 17 Saka kana Mwari akavapa chipo chepachena chakafanana nechaakatipawo isu takatenda munaShe Jesu Kristu, ini ndaiva ani zvangu kuti ndidzivise Mwari?”+ 18 Pavakanzwa izvi, havana kuzoramba vachiita nharo,* uye vakakudza Mwari, vachiti: “Saka kureva kuti Mwari apawo vanhu vemamwe marudzi mukana wekupfidza zvivi vozowana upenyu.”+ 19 Vaya vakanga vaparadzirwa+ nekutambudzwa kwakamuka pamusoro paStefani vakasvika kuFenikiya, Saipurasi, nekuAndiyoki, asi vaingotaura shoko kuvaJudha chete.+ 20 Asi vamwe vevarume vacho vaibva kuSaipurasi uye kuKurini vakauya kuAndiyoki vakatanga kutaura nevanhu vaitaura chiGiriki, vachizivisa mashoko akanaka aShe Jesu. 21 Uyezve, ruoko rwaJehovha* rwakanga ruinavo, uye vakawanda vakava vatendi vakatendeukira kunaShe.+ 22 Mashoko pamusoro pavo akasvika munzeve dzeungano yemuJerusarema, uye ungano yakatuma Bhanabhasi+ kuti asvike kuAndiyoki. 23 Paakasvika, akaona nyasha dzaMwari pavari, akafara, akatanga kuvakurudzira vese kuti varambe vari munaShe nemwoyo wese;+ 24 nekuti aiva munhu akanaka akazara nemweya mutsvene uye kutenda. Uye vanhu vakawanda vakawedzerwa kunaShe.+ 25 Saka akaenda kuTaso kuti anotsvaga Sauro kusvikira amuwana.+ 26 Paakamuwana, akauya naye kuAndiyoki. Saka kwegore rese vaisangana nevamwe muungano, uye vakadzidzisa vanhu vakawanda. Uye muAndiyoki ndimo makatanga kushevedzwa vadzidzi kuti vaKristu, zvichitungamirirwa naMwari.+ 27 Mazuva iwayo kuAndiyoki kwakauya vaprofita+ vachibva kuJerusarema. 28 Mumwe wavo ainzi Agabhasi,+ akasimuka, akataura achiratidzwa nemweya kuti kwakanga kwava kuda kuitika nzara huru munyika yese,+ iyo yakazoitikawo zvechokwadi munguva yaKraudhiyo. 29 Saka vadzidzi vakasarudza kutumira zvinhu zvekuyamura+ hama dzaigara muJudhiya, mumwe nemumwe achibvisa zvaaikwanisa;+ 30 uye ndizvo zvavakaita, vakazvipa Bhanabhasi naSauro kuti vazviendese kuvakuru.+
^ Kana kuti “kuitisana nharo naye.”
^ ChiGir., “vakabva vanyarara.”